winlogon.exe Ukusetshenziswa kokungena ku-Windows – Ukusekela Windows 10
winlogon.exe Ukusetshenziswa kokungena ku-Windows – iyinkqubo enesibopho sokuqala iseshini nokukhipha i-logoff yomsebenzisi. Ifayela le-winlgon.exe lihlala likhona ku-C: \_ Windows \_ System32.
Inqubo ye-winlogon.exe ihlukaniswa ngokuthi “ayibulawe”. Ngeke ususwe ohlwini lwe-executables, usebenzisa, isibonelo, “Umphathi Wezinkampani”. Kodwa kungenziwa ngosizo lwesofthiwe ekhethekile, isibonelo, – Umbuso “I-Process Explorer”. Ukuze “slam” loluhlelo lwenqubo ngokuhlelekile, akwanele ukusebenzisa i-API ephezulu. Lokhu kudinga ukuthola amalungelo e-kernel-level, okuyinto enzima kakhulu ukuhlelwa komsebenzi onjalo.
Inqubo ye-Windows Logon iphinde ihlose umsebenzi wekhibhodi negundane, inesibopho sokukhiya ikhompyutha yakho nokuqalisa izikrini zesikrini emva kwesikhathi sokungasebenzi.
Lokhu kwaziwa ngokuthi “Ukulandelana okulondekile”, ngakho-ke amanye ama-PC angalungiswa ukuze afune ukuthi ucindezele i-Ctrl + Alt + Susa ngaphambi kokuthi ungene ngemvume. Ctrl + Alt + Susa inhlanganisela yezinqamuleli zekhibhodi njalo ibanjwa yi-winlogon.exe, okuqinisekisa ukuthi ungena ngemvume kwideskithophu evikelekile lapho ezinye izinhlelo zingenakuqapha iphasiwedi oyithintayo noma uzenza ingxoxo yokungena ngemvume.
Ngakho, i-winlogon.exe kufanele iqhubeke isebenza ngemuva, ibe ingxenye ebaluleke kakhulu yenqubo yokugunyazwa ku-Windows. Kuwebhusayithi ye-Microsoft, ungathola uhlu oluthe xaxa lwezobuchwepheshe lwamakhono wenqubo ye-Winlogon
Uma leli fayela litholakala kunoma iyiphi enye isiqondisi, kufanele isuswe ngokushesha. Okwamanje, kwaziwa amagciwane angaphezu kwekhulu (isibonelo, [email protected], Spyware.CMKeyLogger, W32 / Netsky-D nabanye abaningi) abasebenzisa igama elithi winlogon.exe ukufihla khona kwabo ohlelweni.
Izinga eliphakeme lokusebenzisa ikhompiyutha yakho (inqubo yeprosesa noma inkumbulo) yenqubo ye-winlogon.exe iphinde ibe uphawu oluqondile lokuthi kukhona okungalungile ngakho. Le nqubo akufanele isebenzise izinsiza eziningi ze-CPU noma i-RAM ezimweni ezivamile.
Ezimweni ezinjalo, sebenzisa ukuskena okugcwele kwesistimu usebenzisa isofthiwe yakho ye-antivirus.
In System Winx64 ingaziwa ngokuthi winlogon.exe Ukusetshenziswa kokungena ku-Windows (32-bit).
I-Windows ayikwazanga ukuxhuma ensizeni ye-%s. Le nkinga ivimbela abasebenzisi abavamile ukuba basayinele ukungena.
Njengomsebenzisi ophethe, ungabuyekeza ilogi yesehlakalo semininingwane yesistimu yokuthi kungani insiza ingasabelanga.
Yehlulekile ukuxhuma ensizeni ye-Windows
Insiza ye-%s yehlulekile ukusayinela ukungena.
Igama lakho lokungena liphelelwa yisikhathi namuhla.
Igama lakho lokungena lizophelelwa yisikhathi ezinsukwini ezingu-%ld.
Cabangela ukushintsha iphasiwedi yakho
Qhafaza lapha ukuze uhlole isimo samadrayivu akho enethiwekhi.
Ayikwazanga ukuphinde ixhume wonke amadrayivu enethiwekhi
I-%s\_%s isenqabile isicelo sakho sokunqamula.
Sicela ulinde i-%s\_%s ukuba iphendule.
Inqubo yokusayinela ukungena yehlulekile ukubonisa izinkethi zokuphepha nezokungena ngesikhathi kucindezelwa okuthi Ctrl+Alt+Delete. Uma i-Windows ingasabeli, cindezela okuthi Esc, noma usebenzise inkinobho yamandla ukuze uqale phansi.
Inqubo yokungena yehlulekile ukukhombisa izinkethi eziqinisekisiwe zengxoxo
Inqubo yokusayinela ukungena yehlulekile ukubonisa izinkethi zokuphepha nezokungena ngesikhathi kucindezelwa okuthi Ctrl+Alt+End. Uma i-Windows ingasabeli, cindezela okuthi Esc, noma usebenzise inkinobho yamandla ukuze uqale phansi.
Author SupportPosted on 05/07/2018 Categories Windows 10Tags winlogon.exe
Previous Previous post: DataExchangeHost.exe Umsingathi Wokushintshana Ngemininingwane
Next Next post: helppane.exe Ukwelekelelwa nokuSizwa kwe-Microsoft